Cabdi Casiis Xildhibaan oo xilka laga qaaday. – Hornafrik Media Network
Cabdi Casiis Xildhibaan oo xilka laga qaaday.
Hornafrik-Afayeenka Wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan) ayaa laga qaaday xilkii uu ku haayay Wasaaradda amniga oo ahaa afayeenka Wasaaradda kadib markii uu dhawaan eedeyn usoo jeediyay Madaxda Qaranka Soomaaliya.
Wareegto ka soo baxday Wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa xilkii looga qaaday afayeenka Wasaaradda amniga laguma sheegin wareegtada sababta xilka looga qaaday Cabdi Casiis Xildhibaanbalse waxaa Warbaahinta loo qeybiyay Wareegtada xil ka qaadista Afayeenka.
Dhawaan ayaa afayeenka Wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan) waxa uu Madaxda Qaranka ku eedeyay in aysan ka soo bixin balantii ay ka qaadeyn Shacabka Soomaaliyeed markii ay ku guda jirayn Olalaha doorashada, sidoo kale Hay’adaha amaanka ayuu ku eedeeyay iney ku fashilmeen amaanka Magaalada Muqdisho.